Matanho gumi nemaviri ekuvaka Kudiwa kweYako Nyowani Agency » Martech Zone
China, April 2, 2015 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 5 maminitsi
Vhiki rapfuura yaive vhiki rinoshamisa pa Yemagariro Media Kushambadzira Nyika kwandakataura pamusoro wenyaya we Influencer Marketing. Nepo vateereri vanga vari makambani aitsvaga mazano ekuti vangashandise sei pazano rakabudirira, ndakadzokera kumba uye ndikave nemubvunzo wakanaka kubva kune mumwe wevange varipo vachida kuziva mashandisiro andakaita simba rakakwana uye kuda kutanga yangu yega agency.
Ndiri kuda kuziva kuti ndingaite sei nezvekutora vatengi (vanobhadhara) kwandiri kuti ndipe kubvunza uye kudzidzisa ... nekuyera izvo zvavanazvo parizvino, ndobva ndapa nzira, mhinduro, matipi uye maitiro akanakisa. Ndinoziva kuti blogging, mabhuku, e-mabhuku, webinars, uye mavhidhiyo nzvimbo dzakanaka dzekutanga. Ndekupi kwandakatanga kuve ndega uye ndinoita sei kuti bhizinesi rangu rikure zvakakwana kuti ndikwanise kuriita izere nguva?
Saka, chii chandakaita kutanga agency yangu uye ndaizozviita sei zvakasiyana?
Yako Network - Bhizinesi rako harienderane nechikwata chako cheKlout, nhamba yevateveri vauinayo, kana yako yekutsvaga masosi. Pakupedzisira, bhizinesi rako richabudirira zvichienderana nekudyara kwaunoita mukuwedzera nekugadzira hukama hwako nehukama hwako hwepanyama. Izvo hazvireve kuti zvemagariro hazvina basa, zvinongoreva kuti zvemagariro hazvinei kusvikira iwe wagona kubatana wega kune avo vari kune rimwe divi rekhibhodi.
Niche Blog - munhu wese aitaura nezve online midhiya panguva yandakatanga bhurogu yangu, asi hapana aitaura zvakananga nezve mhinduro dzinowanikwa kubatsira vatengesi. Ndirwo rwaive rudo rwangu zvechokwadi… ndashanda musoftware seindasitiri yebasa uye ndichikwenya Internet nezvezvinotevera, ndakanga ndave goto chishandiso mukomana wenetiweki yangu. Pakange pasina imwe blog kunze uko saka ini ndakatanga yangu. Dai ndaigona kuzviitazve, ini ndaitozoenda ndakasimba nemusoro wenyaya wangu, jogirafi, kana kutarisa kwemaindasitiri.
Nharaunda - Ini ndakashanya, ndikataura, ndakasimudzira, ndikagovana uye ndikapa mhinduro kune vamwe vatungamiriri munharaunda. Dzimwe nguva ndaibuda nharo navo, asi tarisiro yangu yaive yekuwedzera kukosha pamberi pavo ndichiita kuti zita rangu rizivikanwe kunze uko. Nzira huru yekuita izvi mazuva ano kutanga podcast uye kubvunzurudza vatungamiriri muindastiri iyo iwe yaungade kushanda nayo kana kuti.
kutaura - Dhijitari midhiya haina kukwana (fema!) Saka unofanirwa kuenda kunodzvinyirira nyama. Ini ndakazvipira kutaura kwese kwese kwese nekunyika. Ndakaenderera mberi nekuvandudza hunyanzvi hwangu hwekutaura, hunyanzvi hwekunyora (unogona kupokana izvozvo) uye nehunyanzvi hwekuratidzira Kana ndotaura pachiitiko, ini ndinowana tani yakawanda inotungamira pane kungo blogga. Nekudaro, ini ndinofanira kuramba ndichi blogga kuti ndiwane mukana wekutaura saka haisi imwe kana imwe. Uye nguva imwe neimwe yandaitaura, ndaitove nani zvishoma pane nguva yekupedzisira. Taura kwese uye kune wese munhu!
Targeting - Kune makambani gumi nemaviri andiri kuda kushanda nawo uye ndinoziva kuti ndivanaani, vandinofanira kusangana navo, uye ndinogadzira zvirongwa zvekuti ndichavaona sei. Dzimwe nguva zviri kuburikidza newaunoshanda naye ane chinongedzo paLinkedIn, dzimwe nguva ndinovabvunza zvakananga kunze kwekofi, uye dzimwe nguva ndinokumbira kuvabvunzurudza podcast yedu kana kuvakoka kuti vanyore kuvateereri vedu. Handidi kudaidza izvozvo kutengesa (pamwe kuri kuteedzera), asi kuri kuita navo kuti tione kana tichigona kukodzera sangano ravo uye zvinopesana.
Kubatsira - Kwese kwandaigona, ndaibatsira vanhu vasina tarisiro yekubhadharwa. Ndakavasimudzira, ndakarongedza zvemukati ndikazvigovana, ndakapa mhinduro, uye ndikapa zvese pachena. Unofanira kurangarira kuti kunyange ini ndichigona kubata zviuru zana zvevashanyi, vateereri, vatariri, vanovanda, vateveri, mafeni, nezvimwe pamwedzi… makumi matatu chete kana zvakadaro ndivo vatengi chaivo vanobhadhara. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuvaka mukurumbira, kuve nedzimwe nyaya dzenyaya uye kutyaira mhedzisiro kune vamwe kuti uwane basa. Isu takavaka mukurumbira kutenderedza inbound kushambadzira, nzira dzinogona kuyerwa, yakaoma SEO kune vaparidzi vakuru, uye zvemukati mvumo… Asi zvimwe zvacho zvakatanga nekubatsira vanhu kugadzirisa chimwe chinhu chisingatauri pawebhusaiti yavo.
Kubvunza - Kuudza munhu wese zvauri kugona hakunyatso kushanda zvakanaka kana iwe uri kutengesa. Asi kubvunza munhu wese kwavanoda rubatsiro inzira iri nani. Chaizvoizvo, maminetsi mashoma apfuura ndakasvika kune imwe kambani yatakabatsira iyo organic traffic iri kagumi pane zvayaive makore mana apfuura uye ndokumbira kusangana navo kuti tione kumwe kwatinogona kubatsira. Kubvunza anoshanda. Kunzwa izvo izvo tarisiro kana mutengi ari kunetsekana nazvo wobva waona kana iwe uchigona kushandira pane dzimwe mhinduro kwavari ndiyo nzira kwayo yekupinda nekambani. Tanga kunze kudiki, zviratidze, uyezve iwe unopinda wakadzika uye wakadzika.
Kuzvishingisa - Zviri icky… asi zvakafanira. Kana iwe ukakorokotedzwa, kugoverwa, kuteverwa, kutaurwa, kana chero chinhu chipi chausingazive - iko kusimbisa kukuru kwehunyanzvi hwako. Ini handitendeuke zvachose nekusimudzira zvinotaurwa nevamwe nezvangu. Ini handikurudzire munhu wese kuti azviite, asi kana mukana ukamuka uye mumwe munhu akandipa rumbidzo, ndinogona kuvakumbira kuti vaiise online.
Tarisa Nyanzvi - Domain chaiyo, kero yeemail kudunhu rako (kwete @gmail), kero yehofisi, nyanzvi yekutora mifananidzo, chiratidzo chemazuvano, webhusaiti yakanaka, makadhi ebhizinesi akasarudzika… izvi zvese hazvisi zvekushandisa bhizinesi chete. Ivo vese kushambadzira mari uye zviratidzo zvekuvimbika. Kana ndikaona kero ye gmail, handina chokwadi chekuti uri kurevesa. Kana ndikasaona kero uye nhamba yefoni, ini handina zano rekuti uchave uri mune bhizinesi svondo rinouya. Kuhaya nezve kutendeseka uye mari dzese dzinoonekwa kunze chinhu chekuvimba.
Nyora bhuku - Kunyangwe kana iko chete kutengesa kwaunowana uri iwe naAmai vako, kunyora bhuku kunoratidza kuti chero iyo indasitiri yauri mairi, iwe wakanyatsoiongorora uye wavaka yako yega yakasarudzika nzira yekushanda mairi. Ndisati ndave munyori, ini handina kukwanisa kuwana nguva yezuva kubva kumamwe misangano kana vatengi. Mushure mekunge ndave munyori, vanhu vaipa kundibhadhara kuti ndiuye kuzotaura navo. Zvinotaridza kunge zvakapusa, asi ndechimwe chinhu chaunofunga nezve yako indasitiri.
Tanga Bhizinesi Rako - Hakuchina mari yakakwana uye hapana nguva iri nani yekutanga bhizinesi kupfuura izvozvi. Wese munhu anofunga nezvazvo anofunga kuti vanoda izvi, vanozvida izvozvo, vari kungomirira chimwezve chinhu, nezvimwewo Kusvikira iwe wabuda wega uye wonzwa iko kutyisa kunzwa mugomba remudumbu rako kunoita kuti uve nenzara yakakwana yekuenda kunovhima - uchagara paunenge uri. Mwanakomana wangu anga achitanga kukoreji uye ini ndanga ndafa ndakatyoka pandakatanga DK New Media. Kwemavhiki ndanga ndichirara padhesiki rangu ndichiita mabasa asinganzwisisike kuti ndiwane raramo yevanhu… uye ndakadzidza kugadzirira zvirinani, kushambadza zvirinani, kutengesa zvirinani, kuvhara zvirinani, uye pakupedzisira kuvaka bhizinesi rangu. Marwadzo kukurudzira kunoshamisa kwekuchinja.
ukoshi - Usatarise pane zvaunobhadharisa kana kuti zvakawandisa sei iwe, tarisa pane kukosha kwaunounza vamwe. Ini ndinotarisa vamwe vanhu vanofungidzira zvichibva pamaawa akashanda uye vachienda vakaputsa. Ini ndinotarisa vamwe vachibhadharisa saka ivo vanotsvaga mari uye ivo vari kugara vachitsvaga vatengi vatsva. Izvo hazvina kukwana, asi isu tinotarisa pane kukosha isu kwatinounza vatengi vedu uye wozoisa bhajeti iyo zvese zviri kudhura uye zvakavakoshera. Dzimwe nguva zvinoreva kuti tinoita shanduko diki dzinokonzeresa kuwanda kwemari, dzimwe nguva zvinoreva kuti tinoshandira miswe yedu kugadzirisa zvikanganiso zvedu pasina kana dhiri. Asi kana vatengi vakaona kukosha kwaunounza, ivo havafunge nezvekuti unovadhurira zvakadii.
Hapana chimwe cheizvi, chokwadika, chinofanotaura kubudirira kwako. Tave nemakore akanaka uye tanga tiine makore ane njodzi - asi ini ndanakidzwa nerimwe rawo. Nekufamba kwenguva takagadzira pfungwa yemhando dzevatengi vatinoshanda navo zvakanaka nevamwe vatinofanira kutaura. Uchaita zvikanganiso zvakakura - ingo dzidza uye uenderere mberi.
DK New Media isangano nyowani renhau rinotarisa kushambadzira kuri mukati zvine mutsindo nechikwata chevashambadzi nehunyanzvi hwehunyanzvi. Neboka ravo revamni-chiteshi nyanzvi pane ese madhijitari masvikiro, DK New Media ine chinangwa chekutanga nekugadzirisa kuvapo kwevatengi pamhepo kukura chikamu chemusika, kutyaira zvinotungamira uye kugadzirisa hurukuro dzavo pamhepo. DK yakawedzera musika wevatengi kune wese mutengi wavakashanda navo uye inonyanya kugona pakushanda makambani eetekinoroji sezvo vaine vateereri vazhinji pachinyorwa chino. DK New Media inodada inotungamirwa mumoyo weIndianapolis.
Tags: pamusoro dk new mediabokakubvunzaBloggingvemunharaundaDK New Mediadouglas karrkubatsirakutanga sei agencysamamburenetworkingushambadzikuzvisimudzirakutaurakutanga agencyukoshi
Just For You Kushambadzira
Apr 2, 2015 pa 9: 57 AM
Ndatenda kwazvo nekutora nguva yako kunyora chinyorwa ichi. Izvi ndizvo chaizvo zvinodiwa nemuridzi webhizinesi rese kuti anzwe, kunyangwe kana ivo vachitanga kana vanga vari mubhizinesi kwemakore. Tese tine zvinonetsa uye tinoda kurairwa maitiro ekuzadzisa zvinangwa zvedu. Ini ndakanyatsonakidzwa nekuvimbika kwako uye nekuudza humbowo hwako. Ini ndichave ndichigovana ichi chinyorwa uye vako vaverengi vanozviita.
Apr 2, 2015 pa 5: 03 PM
Apr 2, 2015 pa 4: 32 PM
Ini ndichawedzera imwe. Iva shamwari huru. Ndizvo zvawakaita iwe. Kutenda nekuve shamwari uye nekukorokotedza pane rimwe gore!
Kutenda kuzhinji, Tim! Mhepo inokwira, eh?
Apr 14, 2015 pa 6: 29 AM
Mhoro doug, ndatenda nenyaya ino yakajeka uye chaiyo, ndiri kutanga kambani yangu yekushambadzira yedhijitari muTogo uye mazano ako mabara egoridhe